New Domain Regular Expression (Regex) dia miverina amin'ny WordPress | Martech Zone
Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanampy mpanjifa hanao fifindra-monina sarotra amin'ny WordPress izahay. Ny mpanjifa dia nanana vokatra roa, izay nanjary nalaza hatramin'ny tsy maintsy nanasaratsarahana ireo orinasa, ny marika, ary ny atiny mba hampisaraka sehatra. Tena ny fandraisana andraikitra io!
Mijanona ho azy ireo ny faritra misy azy ireo, saingy ny sehatra vaovao kosa dia hanana ny atiny rehetra momba an'io vokatra io… avy amin'ny sary, lahatsoratra, fandinihana tranga, fisintomana, endrika, loharanom-pahalalana sns. Nanao fanadihadiana izahay ary nandady ilay tranonkala mba hahazoana antoka fa tsy 'tsy mahita fananana tokana.
Raha vantany vao napetraka sy napetraka ny tranokala vaovao dia tonga ny fotoana hisintonana ny switch ary hametraka azy mivantana. Midika izany fa ny URL rehetra avy amin'ny tranokala voalohany an'ity vokatra ity dia tokony hafindra mankany amin'ny sehatra vaovao. Notazoninay tsy tapaka ny ankamaroan'ny lalana manelanelana ireo tranokala, ka ny fanalahidin'ny fanalahidy dia ny fametrahana tsara ireo fanodinana.
Redirect Plugins ao amin'ny WordPress
Misy plugins malaza roa misy, izay tena miasa be amin'ny fitantanana ny fanodinana amin'ny WordPress:
redirection - angamba ny plugin tsara indrindra eny an-tsena, miaraka amin'ny fahaizany maneho hevitra tsy tapaka ary sokajy mihitsy aza amin'ny fitantanana ny fanodinana anao.
SEO Rankmath - ity plugin SEO maivana ity dia fofonaina madio ary manao ny lisitry ny Plugins WordPress tsara indrindra eny an-tsena. Izy io dia manana alàlan'ny fanovana ao anatin'ny tolotra omeny ary hanafatra ny angon-drakitra Redirection aza raha mifindra aminy ianao.
Raha mampiasa motera WordPress Managed WordPress Hosting toa anao ianao WPEngine, manana modely hiatrehana ny fanodinana alohan'ny hitsangan'ilay olona ny tranokalanao… endrika tsara tarehy iray izay afaka mampihena ny fahantrana sy ny fihoaram-pefy amin'ny fampiantranoana anao.
Ary, mazava ho azy, azonao atao manorata fitsipika mankany amin'ny rakitra .htaccess amin'ny mpizara WordPress anao… fa tsy hanome izany aho. Fahadisoan-kevitra syntax iray ianao tsy hahatonga ny tranokalanao tsy hiditra!
Ahoana ny fomba hamoronana Regex Redirect
Ao amin'ny ohatra omeko etsy ambony, dia mety ho toa tsotra ny manao fanovana mahazatra fotsiny avy amin'ny zana-kazo mankany amin'ny sehatra sy zana-tsokajy vaovao:
Misy olana amin'izany. Ahoana raha nizara rohy sy fanentanana izay manana querystring ianao amin'ny fanarahana ny fanentanana na ny fanondroana anarana? Tsy hivezivezy tsara ireo pejy ireo. Angamba ny URL dia:
Satria nanoratra lalao nifanitsy ianao, tsy hizotra mankaiza izany URL izany! Noho izany, mety halaim-panahy ianao hanao azy io ho fomba fiteny mahazatra ary manampy wildcard amin'ny URL:
Tena tsara izany, saingy mbola misy olana roa. Voalohany, hifanaraka amin'ny URL misy azy io / Vokatra-a / ao anatiny ary alefaso amin'ny lalana iray ihany izy rehetra. Ka ireo lalan-kaleha rehetra ireo dia hitodika mankany amin'ny toerana itodiana.
Fitaovana tsara tarehy anefa ny fomba fiteny tsy tapaka. Voalohany, azonao atao ny manavao ny loharano hahazoana antoka fa fantatra ny haavon'ny folder.
Izay hahazoana antoka fa ny haavon'ny folder voalohany ihany no hizotra tsara. Izao ho an'ny olana faharoa… ahoana no hahazoanao ny mombamomba ny querystring voasoratra ao amin'ny tranokala vaovao raha tsy ampidirin'ny fanovana anao izany? Eny, ny fomba fiteny mahazatra dia manana vahaolana tsara amin'izany:
Ny fampahalalana wildcard dia nalaina ary nampidirina ny toerana alehany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny variable. Noho izany ...
Hiverina tsara amin'ny:
Ataovy ao an-tsaina fa ny wildcard dia hahafahan'ny zana-tarika alefa alefa ihany koa, noho izany dia halefa ihany koa:
Mazava ho azy, ny fomba fiteny mahazatra dia mety ho lasa sarotra kokoa noho io… fa mba te hanome santionany haingana fotsiny momba ny fomba fananganana redirect regex wildcard izay mamindra ny zava-drehetra madio amin'ny sehatra vaovao aho!
Tags: redirectredirectredirection pluginMy Notesfitenenana mahazatraplugin WordPress
Sharps spring: Sehatra fivarotana sy varotra mihodina amin'ny marketing feno